I-Gillette Special Shaving Set | Amadoda aSitayela
Uma usaqhubeka nokukhononda nge-uhlu lwezipho kuloKhisimusiNamuhla siphakamisa umbono omusha wokukukhipha kule nkinga. Uhlala unomuntu okunzima kakhulu ukumjabulisa, ilungu lomndeni elijwayelekile esingakaze sifike kulo. Futhi uma usuvele uzame konke, kufaka phakathi izinto zangempela noma eziyingqayizivele emakethe, kungcono ukubuyela kokujwayelekile, izipho zempilo yonke.
Futhi yini eyendabuko ngaphezu kwesethi yokucheba kahle? I-classic engaphumeleli yalo Khisimusi, njengaleyo ehlongozwe ngumkhiqizo kaGillette, onguchwepheshe bemikhiqizo yokushefa. Lesi yisethi yezipho 'Fusion Chrome Collection Power Shave Set', esethulwa ngumkhiqizo ikakhulukazi kulo Khisimusi. Isipho esiwusizo, futhi lokho kuzothanda ikakhulukazi labo abahamba njalo besuka lapha baye laphaya.
Isethi ifika esimweni esisebenzayo nesiqondayo, usayizi ophelele wokuthwala esikhwameni sakho noma esikhwameni. Isethi iqukethe konke okudingayo ukushefa: insingo yokusika, uwoyela ongakashejwa, ukhilimu wokushefa, ibhalsamu elisemuva nangebhulashi. Konke cishe ngama-euro angama-100.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Isethi yokushefa ekhethekile kaGillette
Izikebhe zeqhwa zeGucci